Caalimkii Maqhrib ( Abuu Cumar Ibn Cabdul Barr) | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Waxaan Maanta tooshka ku ifinaynaa in sha Allaah caalim jaliila oo ka mida culamdeenii salafka kuwoodii ugu cadcadaa waa Muxadithki Andalus iyo faqiiheedii ee ahaa Ibnu Cabdul barr. Imaamkani waxuu ahaa baddi cilmiga sidoo kalena aqoonyahankii cilmiga xadiithka iyo Rijaashisa. Waxaa inta u dheeraa aqoonta Cilmul qiraa’aatka iyo weliba Fiqhiga iyo khilaafaadka mass’aaisha fiqiga. Magaciisa & dhalashadiisa
Cabdulwarith bin Sufyaan. Cabdullahi bin Maxamed bin Cabdulmu’min.
Maxamed bin Fatuux Alansaari. Abuu Daauud Suleyman bin abii Qaasim Almuqri
(waa kitaab aanan garanayn wax la mida sidee baan u garanayaa wax ka wanaagsan)! Imaam dahabi isaguna wuxuu yiri maruu tilmaamayay, Ibnu Cabdul bar waa Thiqah(qof lagu kalsoon yahay)Sune raace oona Dhowrsoon. Xaafid Addahabi wuxu yiri wuxuu leeyahay Abuu Cumar kutub wax la mida ayna jirin. Xumeydi ayaa isna isagoo tilmaamaya Muxadithki Andalus iyo faqiiheedii yiri hadalkan.
from → Abuu Cumar ibnu Cabdil-Barr, Taariikhda Culimada Xadiith-ka
← Qawaacidul Mufiidah fii macrifati Rijaalil Bukhaari- Q3aad
Qawaacidul Mufiidah fii macrifati Rijaalil Bukhaari- Q4aad →